Zarganar @ SF Bay – 19th Feb 2012 Sunday | MoeMaKa Burmese News & Media
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများအဖွဲ့ ဖိလစ်ပိုင်သို့လေ့လာရေးခရီးသွား
>my friend Myo Min Htike
မျိုးတေဇာမောင် ● အထက်တန်းကျောင်းမှာ ကဗျာသင်ခြင်း
>Review on Maung Su San's writing
ဖမ်းဆီးခံ လက်ပံတန်းသပိတ် ကျောင်းသားပြည်သူများ အား သာယာဝတီမြို့ တရားရုံးတွင် ပြောင်းလဲ စစ်ဆေးသွားမည်
>Cartoon Saw Ngo – Slogan
>Burmese Signature Campaign joined by oversea Burmese
ကာတွန်း Mr. Burma - ၈ တွေ စီ ... ညီကြဦးစို့
Zarganar @ SF Bay – 19th Feb 2012 Sunday
ကိုဇာဂနာနှင့် မြန်မာမိသားစုတို့တွေ့ဆုံပွဲ ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာ၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ ၊ ချာဘုိုးကောလိပ်၊ ဟေးဝဒ်မြို့မှာ ကျင်းပမည်
မိုးမခရွာဆော်ကြီး၊ ဇန်န၀ါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၂
မြန်မာပြည်မှ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ တလ တာ လာရောက်မည့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်း၊ စွယ်စုံရအနုပညာရှင် ကိုဇာဂနာ၏ ဟောပြောပွဲကို လာမည့် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ ၊ ၂၀၁၂ တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ချဘိုးကောလိပ်မှာ နေ့ခင်း ၁၁ နာရီ မှ ၃ နာရီ အထိ ပြုလုပ်မှာ ဖြစ်ပါသည်။
ကိုဇာဂနာ၏ ကျောင်းနေဖက်သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ သွားဆရာဝန် ဒေါက်တာ မောင်မောင်သော်က အလှူငွေ ဒေါ်လာ ၂ထောင် ကို ပွဲတော်ကျင်းပရေးအတွက် မတည်လှူဒါန်းကြောင်း ကြားသိရပါသည်.။
Sponsors So Far …
ALL SPONSOR LIST
Dr. Jenny Saw MD
Dr. Han Tin DDS
Dr. Dominic Chiong MD
Dr. Tun Hla (Evergreen Dental)
Dr. Thaw (Dixon Landing Family Dental)
John Lee( MRL Group)
Daw San San Win
Dr. Aung Hla MD
Dr. Soe Lwin Win DDS
Dr. Kyaw Kyaw Soe(Today’s Dental)
Dr. Aye Min And Dr. Mu Mu Min endo
Dr. Aung Myint DDS (Viselia)
Dr. Win San Tun DDS
Ko Zaw Min and Ma Khin Khin Htwe
Lynn Lynn(Kyaw Vedio)
Aik Win Wang
Dr. Tet Toe
Dr. Khin Mar Myint
Barbara and Donald Shu
Dr. Aung Khin MD
Daw Thi and family
Dr. Kyaw Tint
၁. မုန့်ဟင်းခါး – ဒေါက်တာဒေါ်ခင်နွယ်စိုး နှင့် မောင်နှမမိသားစုဝင်များ
၂. ကြာဇံဟင်းခါး – ဒေါ်နှင်း မိသားစု
၃. လ္ဘက်ရည် နှင့် ဆမူဆာ – ကိုချိုဦး နှင့် မစုစုသိန်း မိသားစု
၄. မုန့်လက်ဆောင်း – ချိုမြန်မာ အချိုမုန့်
၅. ရွှေရင်အေး – ဦးဌေးကျော် နှင့် ဒေါ်ခင်လှ မိသားစု
၆. မြန်မာမုန့်စုံ – ကိုကျော်သူရ နှင့် မချိုချိုလင်း မိသားစု
၇. ကြက်သားဆာတေး – BADA
၈. လက်ဖက် နှင့် ထမင်း – BYA
၉. ပဲပြုတ်ထမင်းကြော် – ကိုဝင်းထွဋ် နှင့် မလီလီ မိသားစု
၁၀. ထမင်းနဲ – ဒေါက်တာဒေါ်မူမူ နှင့် Richard Park
၁၁. Papaya Salad – ကိုအောင်မြင့် နှင့် မစိုးစိုးဝင်း၊ ကိုအောင်ရွှေ နှင့် မမုလုံ
၁၂. ဒံပေါက် – PHB
၁၃.ရေသန့်ဗူး – နွေဦးဒိုးပတ်
One Response to Zarganar @ SF Bay – 19th Feb 2012 Sunday
admin on February 7, 2012 at 6:50 am